အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကမ္ဘာပေါ်က အလှဆုံး ရေတံခွန်များ
12 Responses to “ကမ္ဘာပေါ်က အလှဆုံး ရေတံခွန်များ”
ရေတံခွန်တွေလှလိုက်တာ.. သွားချင်တယ်... နိုင်ဂရာရေတံခွန်ကို တအားသွားချင်တယ်..း)
ရေတံခွန်ကြီးတွေလှလိုက်တာဗျာ. ပြင်ဦးလွင်ကို တောင်သတိရလာပြီအစ်မရေ...။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကို ဆွမ်းခံကြွတဲ့ကိုယ်တော်တစ်ပါးရှိတယ် .သူ့နာမည်က
ရေတံခွန်ဆို သဘောကျတယ်.။ အားလုံးသွားချင်တယ်.။ မချောလိုက်ပို့.
ရေတံခွန်တွေ လှလိုက်တာ မချောရေ...၊ အခု ပြောခဲ့တဲ့ အထဲက တခုမှကို မရောက်ဖူးသေးဘူး၊း) ယုတ်စွအဆုံး ပွဲကောက်နဲ့ ပိတ်ချင်းမြှောင်တောင် မရောက်သေးတာသာ ကြည့်တော့...၊း)) ရှာရှာဖွေဖွေ မျှဝေတာလည်း ကျေးဇူးပါနော့...။
သဘာဝအလှလေးတွေ မြင်လိုက်ရတော့လည်း စိတ်တွေကြည်လင်သွားတာပါပဲ ကျေးဇူး မချောရေး)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ jasmine အပျော်ဆုံးဖြစ်မှာပဲ
ပွဲကောက်တံခွန်တော့ ရောက်အောင်သွားမှဖြစ်မယ်း)
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်မချော။ ဟိုစုံတွဲတစ်တွဲရေတံခွန်ထိပ်မှာရေကူးနေတာ အသည်းယားလိုက်တာဗျာ။ တကယ်ကိုရှာရှာဖွေဖွေတွေတင်ထားတာပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။ ဆရာမ ငွေပို့ပေးပါလား။ နောက်တာနော်ဆရာမ။
လှလိုက်တာ မချောရေ..Niagara တော့ ရောက်အောင် သွားဦးမယ်...